🥇 ▷ Waxaa lagu sawiray iPhone 6, qeybta cusub ee websaydhka Apple ✅
Waxaa lagu sawiray iPhone 6, qeybta cusub ee websaydhka Apple
Apple waxay kor u qaadeysaa tayada sawirada laga soo qaatay iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus
Apple waxay ku sameysay degelkeeda rasmiga ah a qaybta cusub ee loo yaqaanno Sawir-qaade leh leh iPhone 6. Iyada oo loo marayo qaybtan waxaan ka heli karnaa isku dubaridista sawirada iyo fiidiyowyada runtii fantastik ah oo la qaaday, dabcan, taleefanka casriga ee shirkadda Californian-ka.
World Gallery, kani waa magaca qaybta cusub ee websaydhka Apple oo loogu talagalay sawirro laga sameeyay iPhone 6
Boggan cusub wiilasha shirkadda Californian-ka ah ayaa leh ujeeddado ay doonayaan inay ku muujiyaan tayada sawirrada ee lagu sameeyay iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, tan waxaa lagu gaadhay iyada oo ay uga mahadcelinayaan sawirro taxane ah oo runtii fantastik ah. Apple soo bandhig sawirradan iyada oo sharraxaad ka bixineysa:
Qeybtan cusub ee websaydhka Apple Waxay ina tuseysaa muuqaal balaaran oo sawirro ah oo laga sameeyay meelo kala duwan oo adduunka ah iPhone 6, kuwan dhexdooda waxaan ka heli karnaa meelo sida Halong Bay ee Fiyatnaam, Pamplona ee Iswidhan ama Buuraha Cairngorm ee ku yaal Scotland.
Intaa waxaa dheer, in la bixiyo macluumaad dhammaystiran, Apple wuxuu ku daray sharaxaad ballaaran oo ku saabsan sawirrada aan ka heli karno IPhone 6 World Gallery, marka lagu daro codsiyada loo isticmaalay in laga saaro mid kasta oo kuwan ka mid ah. Inta badan sawirada, sida la filayay, waxaa lagu qaaday codsiga Kaamirada ee ku yimaada habka caadiga ah ee nidaamka hawlgalka mobilada ee AppleHose, waxaa jira kuwo kale oo wax laga beddelay barnaamijyada iPhone sida Instagram, VSCO Cam ama Adobe Photoshop Express.
Sawirka sawirka ee iPhone 6 wuxuu kaloo leeyahay fiidiyoo xiiso leh
Dabcan, fiidiyooga lama waayi karin, sawirkan ballaaran ayaa sidoo kale ku jira dhowr cajiib ah fiidiyowyo lagu duubay iPhone 6, fiidiyowyada noocan oo kale ah waxaa lagu sameeyaa laba ka mid ah qaababkii loogu daray iOS 8, Waqtiga-Lapse iyo Slow Motion. Fiidiyowyada waxaa laga sameeyay Amar R. oo ku yaal Chennai (India), Austin M. oo ku yaal Jökulsárlón Glacier Lake (Iceland) iyo Jay C. oo ku taal Joyce (Washington, USA).
Dabcan, way u qalantaa inaad baarto World Gallery, the Sawir iyo sawirro muuqaal ah oo laga sameeyay iPhone 6 iyo iPhone 6 Plus, waan jeclaanay adiga iyo adiguba?